Sidee kor loogu qaadayaa isku kalsoonaanta | Ragga Stylish
Alicia tomero | | Daryeelka shaqsiyeed, Ku habboon, Caafimaadka
Isku kalsoonidu waa qadarinta uu qofku ka haysto naftiisa. Haddii aragtidan noocan ahi ay hooseyso, waxaan u fahamnay inay tahay is-aragtida nafteena si shakhsiyan ah ama aan raaxo lahayn, annaga oo aan qiimeynayn nafteena. Wax walba waxay ku salaysnaan doonaan dareenno, dareemo, waayo-aragnimo ama fikrado ka dhacay nolosheena oo dhan ama daqiiqad gaar ah, sidaa darteed dareenka noocan ahi wuxuu la xiriiraa xilligeenna shaqsiyadeed. Taasi waa sababta ay tahay inaan ku guuleysanno isku-kalsoonaanta.
Is-qiimayn hoose waa aragti taban oo adiga kugu saabsan. Waxay xambaarsan tahay dhowr arrimood oo in badan inaga xaddidi kara nolol maalmeedkeenna, taasina waa in badan oo dadkan ka mid ahi ay isku dayaan inay isku dayaan inay gartaan dhibaatadan ama ay u tagaan xirfadle si ay uga caawiyaan inay gartaan dhibaatadooda iyo sida loo xali.
1 Calaamadaha aad kuhesho isku kalsooni darada
2 Sida kor loogu qaado isku-kalsoonaanta
Calaamadaha aad kuhesho isku kalsooni darada
Dhamaanteen waxaan leenahay muuqaal maskaxeed nafteena, ee cidda aan nahay, sida aan ugu dhaqmo dadka kale hortooda, haddii aan fiicanahay iyo inaan wali, miisaannono dhammaan qodobbada daciifnimada ah. Waa halkaan markaan sameyneyno sawirkeenna yar yar illaa maanta iyo waxaan abuureynaa is-muuqaal. Qeybtaan waa marka aan sameyno dhaliishayada oo aan qiimeyno waxa ay tahay isku kalsoonaanteenu, hadii ay noqoto mid sare ama mid hoose. Calaamadaha ugu muhiimsan ee ka digaya kalsoonida hoose waxay noqon kartaa:
Inaadan naftaada ku faraxsanayn waxaad had iyo jeer hoos ugu dhacdaa go'aan kasta taasna waxaa hoosta ka xariiqay inaadan isku kalsoonayn.
Ma rabto inaad sheegto waxyaabaha aad jeceshahay iyo ra'yigaaga inaad ka baqeyso inaan si sax ah loo qiimeyn. Taasi waa sababta aadan inta badan ula macaamilin dadka kale maxaa yeelay waxaad u maleyneysaa inaadan jeclaan doonin, ama aadan si wanaagsan u sameyn doonin.
Kuma dadaalaysid inaad hesho waxaad rabto illaa dhamaadkaKala badhkii, waxaa laga yaabaa inaad mar hore tuurtay shukumaanka adigoo u maleynaya inaadan sameyn doonin. Tani waa sababta oo ah waxaad u maleyneysaa inaadan ku qanacsaneyn waxaad sameyneyso, inay ka fiicnaan karto, taasna ay si fudud kuu dhibayso.
Marar badan ayaa si fudud laguugu talaabsaday, maadaama aadan ku dhiiran inaad ku soo rogto dabeecadaada markii ay lagama maarmaan noqoto. Waxaad u maleyneysaa in go’aan ama ra’yi kasta uu horseedi karo guuldarro. Sababtaas awgeed markasta waxaa kugu adag inaad sameyso waxqabad maaddaama aad naftaada dhayalsato xaaladaha bulshada oo aad u malaynaysid inaadan jeclaan doonin.
Waxaad arkaysaa kuwo kale oo kaa sarreeya oo aad jeclaan lahayd inaad iyaga oo kale noqoto. Si aad wanaag u dareento waxaad badanaa u baahan tahay oggolaanshaha dadka kale marar badan. Waxaad u nisbeyneysaa guulahaaga nasiib, sababo dibadeed, iyo guul darrooyinkaaga inaad eedeyso naftaada.
Waa in loo aqoonsadaa taas isku kalsooni yaraan ayaa kaa caawinaysa inaad qof ahaan u koraan. Mustaqbalka fog waxay soo saartaa dhibaatooyinka habdhaqanka iyo xiriirka in aan dooneyno inaan la kulanno dadka kale waxay soo saari kartaa walaac iyo walwal. Waxay sababi kartaa niyad jab iyo isku kalsooni yar, markaa waa inaad daawooyin waaweyn gashaa, oo aad u yeelatid amni iyo adkeysi:
Raadi sababta sababta. Waxaa laga yaabaa sababta in lagu beddelay dhibaato carruurnimo iyo ogaanshaha iyo raadinta asalka ayaa ku siin kara kalsooni dheeraad ah. Caruurnimadu waa tiirka shakhsiyadeena mustaqbalka Hadana haddii aan la kulanay khilaaf weyn waxaa fiican in aad uga gudubno iskaa wax u qabso badan ama aan raadsano caawimaad xirfad leh.
Jooji miiqashada madaxaaga. Haddii aad rabto inaad ku bilowdo inaad naftaada caawiso, jooji markasta inaad ka fikirto isla wax. Waad ka fikiri kartaa fikirkaaga, raadinta daqiiqad nasasho iyo sameynta a aragti muuqaal leh, laakiin daqiiqado murugo iyo xiisad ha ku qasbin inaad had iyo jeer ka fikirto waxa laga yaabo inayan haysan wax looga baxo adoo aan si macquul ah u fikirin.
Ujeeddadu waa in la faraxsanaado. Raadi dhammaan daqiiqadahaas iyo dhacdooyinka kaa caawinaya inaad dareento wanaag oo aad faraxsan tahay. Wax kasta oo kaa dhigaya inaad mid togan, u qiimee sida ugu qumman, waxaad arki doontaa inaad leedahay sifooyin badan oo togan oo ay tahay inaad ogaato sida looga faa’iideysto. Aad naftaada u jecla.
Yeelo yoolal aad gaari karto. Waa caqabado fudud oo aad naftaada dejin karto oo aad u aragto inaad adkaan karto. Si tartiib tartiib ah ayaan u kordhin karnaa waxa aan nafteenna u soo jeedineyno taasna waxay naga caawin doontaa inaan kor u qaadno hankeenna. Waa inaad barataa taas haddii aadan soo bixin markii ugu horreysay oo aan guuldareysanno waxay naga dhigi doontaa inaan wax ka barano qaladaadkeena, Halkani waa meesha ay tahay inaan ku kobcino aqoonteena oo aan u sameyno si ka duwan, marnaba ha jabin dadaalkaas.
Ha isbarbar dhigin ama naftaada ha u noqon naqdin adag. Waa inaad naftaada diirada saartid oo aadan ka hinaasin nolosha dadka kale. Waxa ugu horeeya ee ay tahay inaad ka shaqeyso ayaa ah ku aqbalo oo ku cafiyo. Waxay ku shaqeysaa qorista warqad ku saabsan naftaada. Dhexdeeda, sharrax wax kasta oo aadan naftaada ka helin iyo wax kasta oo aad dambi ku dareento. Xitaa haddii ay kugu qaadato dhowr maalmood inaad qorto, ha iloobin wax faahfaahin ah. Halkaas, ka samee dhaliil wax ku ool ah oo qiimee waxaad ku horumarin karto. Ugu dambayntii ku sagooti warqaddaas adigoo u kala jeexjeexay kun xabbadood.
Ka fikir maalintaada habeen kasta. Adiga kaliya ayaa qiimeyn kara waxyaabaha wanaagsan ee dhacay si ay u noqoto maalin wanaagsan, haddii aysan jirinna, markasta ku mahadnaq wax walba, taas oo caqligal ahaan u dhacday. La joog wanaagga oo diid diidmada, haddii aad raacdo tusaalahan mustaqbalka fog waxaad gacan ka geysan kartaa kor u qaadida isku-kalsoonaanta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Caafimaadka » Sida kor loogu qaado isku-kalsoonaanta